Labaatan casho ayaa laga joogaa | allsanaag
Labaatan casho ayaa laga joogaa
Marka hunguri ku qaado, uu hungurigaasi kula galo Siyaasiyiinta Muqdisho ceebtaada ayaa banaanka imanaysa iyo in lagu ogaado inaad tahay Calooshiis la ciyaar.
Amiin Caamir, labaatan cisho ka hor wuxuu inoo sheegay in Soomaali oo dhami sanadkii ina dhaafay ee 2017 uu ugu howl karsanaa Taabit Cabdi. Maanta xilkii waa laga qaaday Taabit, waxa laga sugayey Amiin Caamir sawir uu arintaa kaga xun yahay inuu soo dhigo. Taasi ma dhicin ee waxa uu soo dhigay Hambalyadii gudoomiyaha cusub oo uu rajo ka qabo inuu jeebkiisa u dhaadhaco.
Taabit siyaasadda Soomaaliya wxuu ku soo galay wuxuu qabaa gabar ay dhashay Nuurto Culusoow oo la dhalatay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Culusoow, Inta la ogyahay waa qoyska ugu musuqmaasaq badan taariikhda Soomaaliya. Amiir Caamir howl karnimo kuma siin Tabit darajadaas ee jeebka ayaa loo buuxiyey
Ugu danbayn marka danbe oo aad argtaan sawir been been ah oo laga sameeyey R’aisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Xaaji Cali Sharmaarke waxaad ogaataan inuu diiday inuu buuxiyo jeebka qaadka weyn ee Amin caamir
← Dukaan Casri ah oo aan qofna joogin Wuxuu Wadaa waa Askarinimo aan Aqli ka Danbeen →